Ihe ọghọm ise nke inwe mmekọ nwoke na nwoke nwere nnukwu amụ - SANTE PLUS MAG - TELES Relay
Ihe ọghọm ise nke inwe mmekọ nwoke na nwoke nwere nnukwu amụ - SANTE PLUS MAG
Ọ bụ ezie na ọtụtụ kwenyere na nnukwu amụ ga-atọ ụtọ, ụfọdụ ụmụ nwanyị na-ekwu nke ọzọ. N’ezie, ịtụ ihe n’ụzọ dị otú a pụrụ ịkpata ihe mgbu ma mebie obi ụtọ a na-enwe mgbe a na-enwe mmekọahụ. Anyị abịakwazie chewe ma ụdị mmekọahụ dị mkpa maka inwe mmekọahụ na-eju afọ. N'ikwu eziokwu, ọ dị ka nnukwu amụ nwere ike ibute ọtụtụ nsogbu.
1. Mgbu mgbe ị na-enwe mmekọahụ
Nnukwu amụ anaghị ekwe nkwa inwe mmekọahụ mgbe niile. Isi Iyi: Nwoke.com
Nature emesapụ aka na obi gị ma ị na-enwe nsogbu iru mmekọahụ gị? O yiri ka nnukwu amụ nwere ike ịkwalite dyspareunia. Ọnọdụ a na-egosipụta ihe mgbu a na-enwe mgbe a na-enwe mmekọahụ. Dị ka otu ọmụmụ bipụtara BJORG: International Journal of Obstetrics and Gynecology, 7,5% nke ụmụ nwanyị na-akọ na ha nwere mmekọrịta mmekọahụ na-egbu mgbu. N'adịghị ka ihe mmadụ nwere ike iche, ọ bụ ụmụ agbọghọ (16-24 afọ) yana ụmụ nwanyị dị afọ 55 ruo 64, na-arịa ụdị ihe mgbu a. Nsogbu a nwere ike ịbụ n'ihi ọtụtụ ihe kpatara kpatara a ga-eji amata ya. Ọ bụrụ na amụ dị oke oke na lubrication ezughi oke, ịbanye n'ime ya nwere ike ịbụ ezigbo ahụhụ nye nwanyị.
Ekworo nke ụmụ nwoke ndị ọzọ
Ogo nke amụ nwere ike imetụta mmekọrịta gị na ụmụ nwoke ndị ọzọ. Isi Iyi: Nwoke.com
Ọtụtụ ụmụ nwoke na-eji onwe ha atụnyere onwe ha ma mepụta ihe mgbagwoju anya n’akụkụ amụ ha. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ụmụ nwanyị na-atụle nke ahụ obere penises na-enye aka na afọ ojuju mmekọahụ, echiche ụgha a na-egosi na otu onye siri ike na-egosipụta ịdị ike nwoke na-adịgide n'uche anyị.
Enweghi ike izochi ochicho
"M na-eme onwe m reusable mposi akwụkwọ mpịakọta na m…
Pointzọ nweta rawụta - Atụmatụ
O nwere ike isi ike ikpuchi ụlọ ere. Isi Iyi: Nwoke.com
Menmụ nwoke niile agbapụla aka na mberede. Ya mere, amụba ọbara amụ na-enweghị ọbara ọ bụla na-akpali agụụ mmekọahụ. Mgbe mgbe, mgbe usoro a dị, mmadụ nkịtị nwere ike ikpuchi ya. Ma ọ bụrụ na amụ dị ukwuu, ọ nwere ike isiri ya ezigbo ike izochi mkpọmkpọ ebe a, tụmadị mgbe nwoke ahụ nọ nịịka ma ọ bụ akwa ọkpa.
4.Nwanyị nwere ike ikwesị ntụkwasị obi
Nwanyị nke nwere ihe mgbu n'oge mmekọahụ nwere ike ịbụ onye na-ekwesịghị ntụkwasị obi. Isi Iyi: Nwoke.com
ọtụtụ na-eme ka nwanyị ghara ntụkwasị obi. Dị ka a ọmụmụ bipụtara na akwụkwọ akụkọ PLOS Otu, nnukwu amụ nwere ike ime ka nwanyị ghọgbuo onye ọlụlụ ya. Iji mezuo nkwubi okwu a, ndị nyocha gbara di na nwunye 545 na Kenya ajụjụ ọnụ. Mụ nwanyị kwesiri igosipụta akụkụ amụ nke onye ọlụlụ ha mgbe ha nwere ụlọ nrụpụta. Yabụ na ọ ga-adị ka ọzoo mkpụkpu, nwanshịi aphụkwanu iya. N'ezie, ọ bụ egwu nke ihe mgbu n'oge mmekọahụ nwere ike iduga ya n'ịghọ aghụghọ ule.
5.Ihe mgbapu condom
Kondom ahụ nwere ike dọkasị n'oge eme ihe ahụ. Isi mmalite: Gyn & co
Ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ ahụ nwere nnukwu amụ, ọ nwere ike isiri ha ike ịchọta condom dabara ha. O di nwute, kondom siri ike nwere ike dọkasị n'oge ịbanye ma bute ujo na ihere. Ya mere, ọ dị mkpa iji hụ na ịchọta condom na-emegharị maka ọdịdị na nha nke amụ iji zere ihe egwu ọ bụla nke afọ ime na-achọghị ma ọ bụ nnyefe nke ọrịa mmekọahụ.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.santeplusmag.com/5-inconvenients-de-faire-lamour-avec-un-homme-qui-a-un-grand-penis/
TELES RELAY 36840 posts 1 comments
PSG: Romain Faivre gbawara, Paris na-ele anya! - AKW FOKWỌ 01
"N'ụlọ akwụkwọ, abụ m onye ọjọọ, mediocre, a disruptive element, a emerụ nwa"
“Ana m eji akwụkwọ mposi m emegharị, ana-asa ya otu…
Kedu otu esi ewepu mkpọchi echefuru na uwe? - AHUIKE tinye MAG
Naanị 1 n'ime mmadụ 7 na-achọta azịza ziri ezi: ole oghere dị na nke a ...
Otu nwoke gburu ma tụba ya n'ime olulu mmiri dị na Douala
Kristen Stewart leghachiri anya na Trump 'SNL' monologue -…
Rihanna No Bra To Get Street Nyere Aha Ya - Video
Kristen Stewart na - egbusi onu ogugu na nkpu denim
You nwere ike ịkọ steeti kacha arụọ ala na United States? - BGR
KRISTEN STEWART SMOLDERS NEW NEW CHANEL MAPUP CAMPAIGN -…
Novelas: ugwu ugwu - Episode 40 • VF -…
"Par-tusa" nke El Dipy in el festejo del PSG: "Esto…